Igwe ikuku, ngwa agha ikuku, etemeete ikuku, Mma-eme- BOLT
Airbrush etemeete Kit na Obere ikuku Compressor Si ...
Hot Hot Multi-Nzube ikuku ahịhịa Compressor Set ...
Otutu Ikikere Mini ikuku Compressor Set Ihe ịchọ mma ...
Ugboro abuo a na-ebunye ya oke ihe
Ngwunye ikuku BT-130
Ngwunye ikuku BT-105
Bkwụ na Airkwụ na magazinekwụ ikuku
Bkwụ bkwụ na Airkwụ ikuku bụ forlọ Nche maka ndị na - ese ihe niile: Bkwụ bkwụ ikuku site na Nzọụkwụ bụ maka ndị niile nwere mmasị na isiokwu ndị bara uru ikuku chọrọ ma ...
Harder & Steenbeck: Nkà na ụzụ ọhụụ f ...
Harder & Steenbeck etinyego nnukwu ego na akụrụngwa ha na Norderstedt, Germany. Ugbo elu ato nke CNC nke igwe ohuru emeputaghi nke oma imeputa ha, kama ha mepere uzo ohuru maka imeputa ihe na mmepe. A ne ...
Ntụziaka Ighalo nke ọhụrụ Iwata: ụzọ 4…
“Uzo abuo iji gbasa” - nke a bu aha echiche ahia ohuru site n’aka ndi Japan nke na emeputa ikuku Iwata. Companylọ ọrụ ahụ na-ewere usoro siri ike, mana enyemaka kachasị maka ndị mbido, na ntinye ikuku a na-abụ otu ị nwere ike iwepụta dị ka enyi na-eji ọrụ. Ebumnuche ebe a bụ g ...
Nyocha gbasara mmepe nke egbe
Gungba egbe bụ ụdị akụrụngwa na-eji ngwa ngwa ewepu mmiri ma ọ bụ ikuku abịakọrọ dị ka ike. Enwere ike iji ya wuo spraying ma bụrụ ihe dị oke mkpa na nhazi ahụ. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ na ebe ịgba mmanụ, dị ka spraying ụgbọ ala spraying, ụgbọala OEM s ...
NINGBO BOLT MACHINERY EPLRONICS & TECHNOLOGY CO., LTD, bụ onye nrụpụta ọrụ ọkachamara na China nke mepụtara n'ịzụlite ikuku, obere ikuku Compressors, egbe ịgba, ngwa ikuku ikuku na ngwaọrụ ndị ọzọ ikuku…